Satria Efa Akaiky Ny Fifidianana Izay Ho Tale Jeneralin’ny OMS, Voampanga Tamin’ny Resaka Kolerà ny Kandidàn’i Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 16:18 GMT
Tamin'ny Janoary 2017, raha nisongadina tamin'ireo kandida telo voalohany ny kandidan'i Ethiopia ho an'ny tale-jeneralin'ny OMS, Tedros Adahanom – nandresy kandidà enina hafa – fotoan-dehibe ho an'ny governemanta ao Ethiopia izany.
Na dia niatrika mpanohitra masiaka teo amin'ireo mpiray tanindrazana aza i Adahanom, dia tsy nampihontsina azy izany, manome fandresena fampielezan-kevitra ho an'ny fampahalalam-baovao-panjakana Etiopiana. Noho ny fampielezan-keviny voatohana ara-bola tsara, nitsidika firenena maherin'ny 120 i Adahanom, ary nahatsiaro natoky tena ireo mpanohana azy fa ho lany izy ary fotoana fotsiny sisa no isaina.
Tamin'ny 13 May, namoaka tantara ny New York Times, izay milaza fa niampanga an'i Adahanom ho nanafina areti-mifindra kolerà telo nanomboka tamin'ny taona 2008 ka hatramin'ny 2011 nandritra ny maha Minisitry ny Fahasalamana azy tao Etiopia ny “manam-pahaizana iray malaza manerantany momba ny fahasalamana”. Nanao ny fiampangana i Lawrence O. Gostin; mpanolo-tsaina tsy ofisialy ao amin'ny iray amin'ireo mpanohitra an'i Adahanom mifaninana hofidiana tale jeneraly, David Nabarro avy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, saingy nilaza tamin'ny New York Times i Nabarro fa tsy nilaza tamin'i Gostin mba hanao ny fiampangana amin'ny anarany.
Nony farany! Miantso ny kandidà ho Tale Jeneralin'ny @WHO @DrTedros ny @NYTimes noho ny fandrakofana momba ny areti-mifindra kolerà amin'ny fampiasana teny malefaka Aretin-kibo Mipiriritra Be.
Abebe Gellaw, mpanao gazety Etiopiana malaza any am-pielezana, nanoratra tao amin'ny Facebook fa vao fanombohany fotsiny izany:
Nanomboka ny Aprily 2014, nanohitra ny governemanta ilay hetsi-panoherana malaza ao Etiopia, izay namaly tamin-kerisetra. Araka ny filazan'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona, olona 800 fara fahakeliny no namoy ny ainy, ary mpanohitra ara-politika an'arivony sy mpanohitra an-jatony no voampanga ho manao fampihorohoroana. Nanomboka tamin'ny Oktobra 2016, efa nametraka lalàna momba ny sivana henjana indrindra manerantany ny manampahefana taorian'ny fanambarany ny firenena ho latsaka an-katerena.